Klonopin vs. Ativan: मतभेद, समानताहरू र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय, कल्याण समाचार, कल्याण घरपालुवा जनावर भारी खेल समुदाय खेलहरु स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण औषधि जानकारी, समाचार स्वास्थ्य प्रेस कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार औषधि जानकारी कम्पनी, समाचार समुदाय, कम्पनी
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> Klonopin vs. Ativan: मतभेद, समानताहरू र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
क्लोनोपिन (क्लोनाजेपम) र अटिभन (लोराजेपाम) दुई औषधी हुन् जसले चिन्ताका विकारहरूलाई उपचार गर्न सक्छन्। दुबै औषधीहरूलाई बेन्जोडाइजेपाइनका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ जुन दिमागमा GABA रिसेप्टर्सलाई बाँधेर काम गर्दछ। गाबा (गामा-एमिनोब्यूटेरिक एसिड) दिमागमा प्रमुख न्यूरोट्रान्समिटर हो जसको अवरोधकारी प्रभावहरू हुन्छन्। जब दुबै औषधिहरू समान तरिकाले काम गर्दछन्, तिनीहरूसँग कसरी प्रयोग हुन्छन् भन्नेमा तिनीहरूमा केही भिन्नताहरू छन्।
Klonopin र Ativan दुबै मध्यवर्ती अभिनय benzodiazepines मानिन्छ। यसको मतलब उनीहरूको प्रभाव समान औषधि भन्दा लामो समय सम्म रहन सक्छ।
क्लोनोपिन बनाम अटिभानका बीचका मुख्य भिन्नताहरू के के हुन्?
Klonopin (Klonopin के हो?) क्लोनाजेपमको ब्रान्ड नाम हो। यो आतंक डिसऑर्डर र दौरा उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। Klonopin शरीरमा अपेक्षाकृत लामो 30०- 40० घण्टाको आधा जीवनको साथ रहन्छ। यसको मतलब यो हो कि एक व्यक्ति अझै पनि Klonopin ले यो पछि यो केहि समयको सुस्त प्रभाव महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
अटिभन (एटिभन के हो?) लोराजेपमको ब्रान्ड नाम हो। यो चिन्ता र दौरा उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। ईन्जेक्टेबल फारम केही प्रक्रिया अघि एनेस्थेसियाको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अटिभनको शरीरमा करीव २० घण्टाको आधा जीवन हुन्छ।
Klonopin vs Ativan बीच मुख्य भिन्नता
ब्रान्ड / जेनेरिक स्थिति जेनेरिक संस्करण उपलब्ध छ जेनेरिक संस्करण उपलब्ध छ
ब्रान्ड नाम के हो? सामान्य नाम: क्लोनाजेपाम
ब्रान्ड नाम: Klonopin सामान्य नाम: लोराजेपाम
ब्रान्ड नाम: एटिभन
मानक खुराक के हो? तपाईको डाक्टरको निर्देशन अनुसार दिनको दुई पटक 0.25 मिलीग्राम १ मिलीग्राम प्रति दिन दुई पटक तपाईको डाक्टरको निर्देशन अनुसार
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? तपाइँको डाक्टरको निर्देशन अनुसार दैनिक तपाइँको डाक्टरको निर्देशन अनुसार दैनिक
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? आतंक विकार: वयस्क १ 18 बर्ष र माथिका
दौरा: वयस्क वा १० बर्ष उमेरका बच्चाहरू चिन्ता: वयस्क वा १२ बर्ष वा माथिका बच्चाहरू
Klonopin मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Klonopin मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
Klonopin र Ativan द्वारा उपचार अवस्था
Klonopin र Ativan दुबै दौडहरू उपचार गर्न FDA अनुमोदित छन्। क्लोनोपिनले अकिनेटिक र मायोक्लोनिक दौराको साथसाथै लेनोक्स-ग्यास्टौट सिन्ड्रोमको परिणामस्वरूप उपचार गर्न सक्दछ। अटिभन अधिक गंभीर प्रकारको दौराको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ जसलाई स्थिति इपिलेटिकस भनिन्छ।
Klonopin चिन्ता र आवर्ती आतंक आक्रमणको लक्षणहरूको उपचार गर्न सिफारिस गरिएको छ। अटिभन चिन्ता वा चिन्ताको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ जुन डिप्रेसनबाट उत्पन्न हुन्छ। दुबै औषधिहरू अन्य प्रकारको चिन्ता विकारहरू जस्तै सामाजिक फोबियाको लागि अफ-लेबलको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अटिभन एफडीएलाई अनिद्राको उपचार गर्न स्वीकृत गरिएको छ जबकि केही डाक्टरहरूले निद्रा सम्बन्धी समस्याहरूको लागि क्लोनोपिनलाई अफ-लेबल सल्लाह दिन्छन्। Klonopin र Ativan का लागि अन्य अफ-लेबल प्रयोगहरूमा मदिरा फिर्ता र आन्दोलनको उपचार समावेश छ।
योजना बी काम गर्ने सम्भावना के हो?
सर्त Klonopin अटिभन
चिन्ता हो हो
आतंक विकार हो अफ-लेबल
रक्सी फिर्ता लक्षणहरू अफ-लेबल अफ-लेबल
Klonopin वा Ativan अधिक प्रभावी छ?
सामान्यतया, Klonopin र Ativan दुबै प्रभावकारी औषधि उपचार हुन्। किनभने तिनीहरू अन्य उद्देश्यका लागि अध्ययन गरिएको हो, तिनीहरूको प्रभावकारि अवस्था उपचारको आधारमा फरक पर्न सक्छ।
मा मल्टीसेन्टर अध्ययन , Klonopin (clonazepam) र Ativan (lorazepam) मा सक्रिय तत्वहरू चिन्ताका विकारहरूको उपचारको लागि समान रूपमा प्रभावशाली पाए। चिन्ता र निद्रा स्कोरमा सुधार हेर्दा यी औषधिहरू बीच कुनै खास भिन्नता फेला परेन। यद्यपि अध्ययनले पत्ता लगायो कि क्लोनाजेपामसँग कम साइड इफेक्टहरू थिए (२.7..7% बनाम 43 43..9%)।
अर्को अध्ययन क्लोनाजेपाम र लोराजेपाम को उपयोग इपिलेप्टिकस को लागी तुलना, एक गंभीर प्रकारको दौरा। जे होस् लोराजेपाम स्वीकृत हुन्छ र स्थिति इपिलेटिकसको लागि अधिक व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, क्लोनाजेपाम एक उपयोगी विकल्पको रूपमा फेला पर्‍यो। क्लोनाजेपाम कहिलेकाँही यस उद्देश्यका लागि अफ-लेबल प्रयोग गरिन्छ।
तपाईंको चिकित्सक वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श गर्नुहोस् जसले उचित चिकित्सा सल्लाह दिन सक्छ। तपाईंको चिकित्सा ईतिहासमा निर्भर गर्दै, एक विकल्प अर्को भन्दा राम्रो हुन सक्दछ।
कभरेज र क्लोनोपिन बनाम अटिभनको लागत तुलना
जेनेरिक क्लोनोपिन प्राय: मेडिकेयर र प्राय जसो बीमा योजनाहरूले ढाक्दछन्। Klonopin को औसत खुद्रा लागत लगभग 1 241 हो। एकलकेयर डिस्काउंट कार्डको साथ, तपाईं जेनेरिक क्लोनोपिनमा बचत गर्न सक्नुहुनेछ र लगभग $ १० तिर्न सक्नुहुनेछ।
जेनेरिक अटिभन प्रायः मेडिकेयर र प्राय जसो बीमा योजनाहरूले ढाक्दछ। अटिभनको औसत खुद्रा लागत लगभग $ २१ हो। एकलकेयर डिस्काउंट कार्डको साथ, तपाईं जेनेरिक अटिभनमा बचत गर्न सक्नुहुनेछ र around लगभग around तिर्न सक्नुहुन्छ।
यसको मतलब के हुन्छ जब तपाइँको हेमटोक्रिट कम हुन्छ?
मानक खुराक १ मिलीग्राम ट्याब्लेट (of० को आपूर्ति) ०. mg मिलीग्राम ट्याब्लेट (of० को आपूर्ति)
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे तपाईंको बीमा योजना मा निर्भर गर्दछ तपाईंको बीमा योजना मा निर्भर गर्दछ
एकलकेयर लागत $ १० $
Klonopin र Ativan का आम साइड इफेक्टहरू
Klonopin र Ativan को समान साइड इफेक्टहरू छन्, मुख्यतया केन्द्रीय स्नायु प्रणाली (CNS) लाई प्रभावित गर्दछ। CNS उदासिनताको रूपमा, यी ड्रग्सले निन्द्रा, चक्कर आउँछ, बिग्रिएको सोच वा स्मृति, र स्थिरता वा समन्वयको साथ समस्या निम्त्याउन सक्छ। दुबै औषधीहरूले पनि केही व्यक्तिहरूमा निराश गराउन वा बिगार्न सक्छ, विशेष गरी उपचार न गरको निराशाको साथ।
तन्द्रा हो %% हो १.9..9%
डिप्रेसन हो %% हो n / a
चक्कर हो १% हो 9.9%
नर्भस हो १% हैन -
समन्वयको अभाव हो १% हो 4.4%
संज्ञानात्मक डिसफंक्शन हो १% हो n / a
कमजोरी हैन - हो 2.२%
* सबै सम्भावित साइड इफेक्टहरूको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श गर्नुहोस्।
स्रोत: डेलीमेड ( Klonopin ), डेलीमेड ( अटिभन )
क्लोनोपिन बनाम अटिभनको ड्रग अन्तर्क्रिया
Klonopin र Ativan अन्य ड्रगहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छ जुन समान प्रभावहरू निम्त्याउँछ। बेन्जोडियाजेपाइनसँग मादक पदार्थ वा ओपिओइड लिनुले बेहोरापन, निन्द्रा, र, गम्भीर अवस्थामा, सास फेर्दै, कोमा, र मृत्यु जस्ता साइड इफेक्टहरू बढाउन सक्छ।
बेन्जोडियाजेपाइनहरूले अन्य सीएनएस डिप्रेसन्ट ड्रगहरू जस्तै एन्टिकोनभल्सेन्ट्स, एन्टीडिप्रेससन्ट्स, एन्टिसाइकोटिक्स, एनेस्थेटिक्स, बार्बिटुरेट्स, र अन्य शामकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछन्। यी औषधिहरू सँगै प्रयोग गर्नाले तन्द्रा र सुस्वास्थ्य जस्ता साइड इफेक्टहरू बढाउन सक्छ।
किनकि क्लोनोपिन र अटिभन कलेजोमा प्रशोधित हुन्छन्, त्यस्तै गरी प्रोसेस गरिएको अन्य औषधिहरू मार्फत उनीहरूलाई टाढा वा अनुगमन गरिनु पर्छ। लिभर एन्जाइम अवरोधकर्ताहरूले एरिथ्रोमाइसिन, केटोकोनाजोल, र रीटोनाविर समावेश गर्दछ जसले शरीरमा बेंजोडाइजेपाइनको स्तर बढाउन र यसको साइड इफेक्ट बढाउन सक्छ। लिभर एन्जाइम इन्डुसेसरमा कार्बामाजेपाइन र फेनिटोइन समावेश हुन्छ जसले शरीरमा बेंजोडाइजेपाइनको स्तर घटाउन सक्छ।
औषधि ड्रग क्लास Klonopin अटिभन
मेथाडोन ओपियोड्स हो हो
Valproic एसिड एन्टिकोनभल्सेन्ट्स हो हो
रिसपरिडोन एन्टिसाइकोटिक्स हो हो
रिफाम्पिन एन्टिबायोटिक हो हो
Itraconazole एन्टिफंगल एजेन्ट हो हो
* यो सबै सम्भावित ड्रग अन्तरक्रियाको पूर्ण सूची नहुन सक्छ। तपाईले लिने सबै औषधिहरूको साथ डाक्टरलाई परामर्श लिनुहोस्।
Klonopin र Ativan को चेतावनी
बेन्जोडियाजेपाइन र ओपियोइड एकसाथ लिनु हुँदैन। त्यसो गर्नाले श्वासप्रश्वासको उदासीनता, कोमा र मृत्युको ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्छ।
बेन्जोडियाजेपाइनहरू DEA द्वारा अनुसूची IV औषधि मानिन्छ। अर्को शब्दमा, तिनीहरूसँग दुर्व्यवहार र निर्भरताका लागि केहि सम्भावना छ। त्यसकारण, तिनीहरू प्राय: छोटो अवधिको प्रयोगको लागि सिफारिस गरिन्छ।
Klonopin र Ativan वृद्ध वा जो झर्ने जोखिममा हुन सक्छ मा जोगिनु पर्छ। किनभने दुबै ड्रग्सले कलेजोलाई असर गर्छ, कलेजो रोग भएका बिरामीहरूमा पनि उनीहरूको निगरानी गरिनु पर्छ।
Klonopin र Ativan गर्भावस्था कोटि D मा सूचीबद्ध छन्। तसर्थ, तिनीहरू गर्भावस्था को समयमा लिनु हुँदैन। गर्भावस्थाको योजना बनाउँदा कस्ता कदमहरू चाल्नु पर्छ भन्ने बारे डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्। तिनीहरूलाई स्तनपानको समयमा पनि वेवास्ता गर्न वा निरीक्षण गर्न सकिन्छ।
क्लोनोपिन बनाम अटिभनको बारेमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
Klonopin के हो?
क्लोनोपिन एक मध्यवर्ती अभिनय बेन्जोडियाजेपाइन हो। Klonopin को जेनेरिक नाम क्लोनाजेपम हो। यो दौरा र आतंक विकार (agoraphobia सहित) को उपचार गर्न अनुमोदित छ। Klonopin एक चिकित्सा मूल्यांकन र पर्चेको आवश्यक छ।
अटिभान एक ब्रान्ड नाम बेन्जोडियाजेपाइन हो जुन यसको जेनेरिक नाम लोराजेपामद्वारा चिनिन्छ। यो चिन्ता र केही प्रकारका दौडहरूको उपचार गर्न अनुमोदित हो। एक तालिका IV औषधि को रूप मा, यो दुरुपयोग र शारीरिक वा मनोवैज्ञानिक निर्भरता को लागी सम्भावना हुन सक्छ।
के क्लोनोपिन र अटिभन एकै हो?
क्लोनोपिन (क्लोनाजेपाम) र अटिभन (लोराजेपाम) समान बेंजोडायजेपाइनहरू हुन् जुन समान तरिकाले काम गर्दछन्। जबकि ती दुबै चिन्ता विकार र केही दौरामा उपचार गर्न सक्छन्, तिनीहरूसँग कति लामो समय सम्म काम गर्ने फरक छ। अटिभनलाई एनेस्थेसियाको पूर्व उपचारको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ जबकि क्लोनोपिन सामान्यतया यो उद्देश्यका लागि प्रयोग हुँदैन।
Klonopin वा Ativan राम्रो छ?
Klonopin र Ativan दुबै चिन्ता र जब्ती विकार सहित निश्चित अवस्था को उपचार को लागी दुवै प्रभावकारी पर्चेको औषधि हो। तपाईंको चिकित्सा ईतिहासमा निर्भर गर्दै, तपाईंलाई एक अर्कामा सिफारिश गरिएको हुन सक्छ।
के म Klonopin वा Ativan गर्भवती हुँदा प्रयोग गर्न सक्छु?
Klonopin र Ativan गर्भवती महिलाहरूको लागि सिफारिस गरिदैन। गर्भवती हुँदा बेन्जोडियाजेपाइन लिदा जन्म दोषहरूको जोखिम बढाउन सक्छ। लाभहरू जोखिमहरू भन्दा बढी हुन सक्दछ कि भनेर हेर्न डाक्टरसँग सल्लाह लिनुहोस्।
के म Klonopin वा Ativan रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
मद्यपान गर्दा क्लोनोपिन र अटिभन सिफारिस गरिदैन। त्यसो गर्नाले निन्द्रा र बेहोराउने जोखिम बढाउन सक्छ। बेन्जोडियाजेपाइनसँग रक्सी पिउँदा पनि अधिक मात्रा, श्वासप्रश्वासको उदासी, कोमा र मृत्युको जोखिम बढ्न सक्छ।
Klonopin Ativan भन्दा राम्रो छ?
Klonopin यसको लामो चिरस्थायी प्रभावको लागि प्राथमिकता पाउन सकिन्छ सर्त उपचारको आधारमा। Klonopin केहि रुकावट को लागी प्राथमिकता हुन सक्छ। यो अकिनेटिक र मायोक्लोनिक दौरा उपचार गर्न अनुमोदित छ जबकि अटिभन एफडीए स्वीकृत हुन्छ एप्पलिप्टिकस स्थिति उपचार गर्न।
Xanax वा Ativan अझ मजबूत के हो?
Xanax (alprazolam) अटिभान भन्दा चाँडो अवशोषित हुन्छ। Xanax बाट प्रभाव १ देखि १. hours घण्टा भित्र महसुस गर्न सकिन्छ जबकि Ativan बाट प्रभाव लिनको लागि केहि लामो समय लिन सक्दछ। जे होस्, अटिभन लामो समय शरीरमा रहन्छ किनभने यो अवशोषित र अधिक बिस्तारै प्रशोधन हुन्छ।
कुन बेन्जोडियाजेपाइन सब भन्दा बलियो छ?
बेन्जोडियाजेपाइन बिभिन्न प्रयोग हुन सक्छ। तसर्थ, सब भन्दा कडा बन्जोडाइजेपाइन यो केको लागि प्रयोग भइरहेको छ र कसरी लिन्छ भनेर निर्भर गर्दछ। हलसिओन (ट्राएजोलम) र वर्सेड (मिडाजोलम) छोटो अभिनय गर्ने बेन्जोडाइजेपाइनहरू हुन् जुन चाँडै काम गर्न सक्दछ।
ओटीसी र प्रिस्क्रिप्शन धूम्रपान समाप्ति औषधिहरूको लागि मेरा विकल्पहरू के हुन्
शीर्ष U० अमेरिकी शहरहरूमा सब भन्दा लोकप्रिय ड्रगहरू
कसरी थाहा छ यदि तपाइँ ल्याक्टोज हुनुहुन्छ
खमीर संक्रमण को लागी क्रेनबेरी को रस कस्तो प्रकार को
बीमा बिना जन्म नियन्त्रण चक्की को मूल्य
उपवास पछि रगत चिनी के हुनुपर्छ?
के हुन्छ यदि तपाइँ धेरै धेरै ibuprofen लिनुहुन्छ
कति समय पछि तपाइँ सेक्स योजना लिनुहुन्छ b